Sales Supervisor Archives - Glory Assumption Space
Sales Supervisor – Male - (5) Posts /လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်+ကော်မရှင်+တခြားခံစားခွင့်များ
Location in : Taunggyi
၁) Sales Supervisor – Male - (5) Posts /လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ်+ကော်မရှင်+တခြားခံစားခွင့်များ / တောင်ကြီးမြို့ ။ • အဝေးသင်ဖြင့် ကျောင်းဆက်မတက်သူဖြစ်ရမည်။ • Chinese ရေး၊ဖတ်၊ပြော နိုင်သူဦးစားပေးမည်။ • FMCG အရောင်းပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။ • ကားမောင်းတတ်သူဦးစားပေးမည်။ • တောင်ကြီးတွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • တောင်ကြီးမြို့တွင်ရှိသော FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ကြီးမြို့တွင်ရှိသော FMCG Distribution Company ကြီးတွငတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါ ရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Supervisor- Male /Female - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)
၁) Sales Supervisor- Male /Female - (5) Posts /လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ Job Requirements •	ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ •	FMCG ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည်။ •	အရောင်းပိုင်းတွင် ကျွမ်းကျင်စွာရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဖုန်းဖြင့် Customer များနှင့်လည်းပြောဆိုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer ( MS Office ,Internet & Email ) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	လှိုင်သာယာအနီးတ၀ိုက်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် မနက် ( ၈ ) နာရီခွဲ မှ ညနေ ( ၄ ) နာရီခွဲအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	ယူနီဖောင်း၊ဖယ်ရီစီစဉ်ပေးပါသည်။ •	လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော FMCG Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင်ရှိသော FMCG Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Supervisor – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်း နှင့် အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ။
1. Sales Supervisor – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်း နှင့် အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	English4Skill (Fluent) ကျွမ်းကျင်ရမည်။ •	ရေတိုင်ကီ အရောင်းပိုင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ •	Sales Target များပြည့်မှီအောင်ရောင်းနိုင်သူဖြစ်ပြီးလက်အောက်ငယ်သားများအားဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer , Email & Internet ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ (Microsoft Word, Excel , Power Point , etc .. ) •	ဈေးကွက်အသစ်များတက်ကြွစွာရှာဖွေနိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:30 PM ) •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ •	မရမ်းကုန်း နှင့် အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ရေတိုင်ကီများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်း နှင့် အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ရေတိုင်ကီများ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသော Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Supervisor – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / အလုံမြို့နယ်
Sales Supervisor – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / အလုံမြို့နယ် ။ JOB REQUIREMENTS : • Must have2years of experience in furniture market asasales supervisor • Must be the holder of any Bachelor’s degree , sales & marketing certificate ( or ) Diploma • Preferred in sales & marketing certificate . • Age between ( 25 ) to ( 35 ) years old . • Able to use Microsoft Office ( Word , Excel ,Power point) . • Excellent verbal and written communication skill • Focused on customer service and goal-oriented • Ability to multitask , prioritize ,and manage time efficiently • Office Hours 9:00 AM to 5:30 PM • ( 1 ) Day Off / Week • Uniform Provide • သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်တွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည် ။ • အလုံမြို့နယ်ရှိ Furniture Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ Job Responsibilities : • Increased sales and established strong relationships withanew and existing customers • Implement strategies to sell products • All around supervising forashowroom ( sales ,staff, stock ,cleaning , maintenance ) • Train and sharing knowledge with junior sales staff • Documentation for all call information to SOP • Reporting monthly activities , customer income , ground stock , sales report & other requirements • Learn about market trends and information GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အလုံမြို့နယ်ရှိ Furniture Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number – 09 263121101 , 09 - 977397705 , 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09 263121101 , 09977397705 , 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Supervisor – Male (10) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
Sales Supervisor – Male (10) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • ရေတိုင်ကီပစ္စည်းအရောင်းပိုင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ • Sales Target များပြည့်မှီအောင်ရောင်းနိုင်သူဖြစ်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားများအား ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • English communication ကောင်းရမည်။ • Computer , Email & Internet ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ (Microsoft Word, Excel , Power Point , etc .. ) • ဈေးကွက်အသစ်များ တက်ကြွစွာ ရှာဖွေနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:30 PM ) • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • ဖယ်ရီ နှင့် ယူနီဖောင်းရှိသည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ • မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Supervisor – Male/Female (10) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
Sales Supervisor – Male/Female (10) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • ရေတိုင်ကီအရောင်းပိုင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ • Sales Target များပြည့်မှီအောင်ရောင်းနိုင်သူဖြစ်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားများအား ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • English communication ကောင်းရမည်။ • Computer , Email & Internet ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ (Microsoft Word, Excel , Power Point , etc .. ) • ဈေးကွက်အသစ်များ တက်ကြွစွာ ရှာဖွေနိုင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:30 PM ) • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ • ဖယ်ရီ နှင့် ယူနီဖောင်းရှိသည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ • အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Supervisor – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်
Sales Supervisor – Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ။ • ကျောက်မျက်ရတနာပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍အတွေ့အကြုံ ( ၂ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Computer ရရမည် ။ • အသက် ( ၃၀ ) နှစ်မှ ( ၃၅ ) နှစ် ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည် ။ • ရုပ်ရည်ပြေပြစ်သူဖြစ်ရမည် ။ • Time City တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉း၀၀ နာရီမှ ညနေ ၉း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည် ။ • မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကျောက်မျက်ရတနာ Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကျောက်မျက်ရတနာ Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း )/ လှိုင်မြို့နယ်
Sales Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း )/ လှိုင်မြို့နယ် ။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၃ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • ကားမောင်းလိုင်စင်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ကားမောင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • Management ပိုင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • Computer အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • FMCG ပိုင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • နေ့ဆိုင်း ၊ ညဆိုင်း ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • အင်တာဗျူးဝင်လျှင် လှိုင်မြို့နယ် တွင် အင်တာဗျုးဝင်ရမည် ။ • အလုပ်လုပ်ပါက မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင် အလုပ်ဆင်းရမည် ။ • တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • လှိုင်မြို့နယ်ရှိ FMCG Manufacturing Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလှိုင်မြို့နယ်ရှိ FMCG Manufacturing Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number -, 09262223784 , 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783, 09262223785 Viber Phone Number – 09262223784 , 09977397705 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Supervisor – Male (10) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) +++
အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ 1.	Sales Supervisor – Male (10) Posts / လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) +++ / လှိုင်သာယာမြို့နယ် ။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၂၅ - ၃၀)နှစ် ၀န်းကျင်ခန့်ရှိရမည်။ •	FMCG Company တွင် Sales Supervisor ရာထူးဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိရမည်။ •	ရန်ကုန်မြို့တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ရမည်။ (သန်းခေါင်စာရင်းပြနိုင်ရမည်။) •	ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အထူးကောင်းမွန်ရမည်။ •	Microsoft Office Application များဖြစ်သော Word, Excel, Power Point တို့အားကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ရမည့်အပြင် Internet & Email အစရှိသည်တို့အားလည်း ကောင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ •	ယခင်ကလုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်သည့် အထောက်အထားများပြသနိုင်ပါက ပိုမိုအဆင်ပြေပါသည်။ •	အလုပ်ချိန် (8:30 AM – 5:00 PM ) •	ယူနီဖောင်းရှိသည်။ ဖယ်ရီရှိသည်။ •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ • လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ FMCG Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ FMCG Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_5277" align="alignnone" width="612"] Wooden staircase to reach goal and win trophy with increase graph and arrow, successful[/caption]
Sales Supervisor – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း)
အင်တာဗျူး အမြန်ဝင်ရမည်။ 1. Sales Supervisor – Male (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် (ညှိနှိုင်း) / မော်လမြို့ ။ •	မော်လမြိုင်မြို့တွင် နေထိုင်သောသူဖြစ်ရမည်။ •	ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ •	အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအရောင်းပိုင်းဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ် အနည်းဆုံးရှိရမည်။ •	Sales Target များပြည့်မှီအောင်ရောင်းနိုင်သူဖြစ်ပြီး လက်အောက်ငယ်သားများအား ဦးဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Computer , Email & Internet ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ (Microsoft Word, Excel , Power Point , etc .. ) •	ဈေးကွက်အသစ်များ တက်ကြွစွာ ရှာဖွေနိုင်ရမည်။ •	အလုပ်ချိန် ( 8:30 AM – 5:30 PM ) •	တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည်။ •	လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ • မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မော်လမြိုင်မြို့ရှိ Manufacturing & Trading Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Supervisor ( Baby Product ) – Female – ( 11 ) Posts - လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း )
၁) Sales Supervisor ( Baby Product ) – Female – ( 11 ) Posts - လစာ - ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် ( ညှိနှိုင်း ) ( လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည် ။ ) - ကမာရွတ်မြို့နယ် ။ - ကလေးသုံးဆောငျပစ်စညျး ဆိုငျရာ လုပျငနျးအတှကွေုံ့ ရှိပွီး သကျဆိုငျရာ လုပျငနျးနှငျ့ ပတျသတျပွီး မနျနဂြော အဆငျ့လုပျကိုငျဖူးသူ ၊ ဆိုငျတှငျးရှိ ဝနျထမျးမြားကိုကောငျးမှနျစှာ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျရမညျ။ - တာဝနျယူ တာဝနျခံနိုငျရမညျ။ - ပညာအရည်အချင်းဘွဲ့ရ ၊အရောင်းပိုင်းနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရှိရမည်။ - ကွန်ပျူတာ Excel / Word / E-mail ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ၊ဈေးကွက်ချဲ့ ထွင်နိုင်ရမည်။ - အသက်( ၂၀ ) နှစ် မှ ( ၃၅ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - အလုပ်ချိန် မနက် ( ၉ ) မှ ည ( ၈ ) အထိ ။ - ပိတ်ရက် - စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်သည် ။ - ယူနီဖောင်း ရှိသည် ။ - ဖယ်ရီ မရှိပါ ။ - FMCG နှင့် Baby Products Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09-977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ ) [caption id="attachment_5277" align="alignnone" width="612"] Wooden staircase to reach goal and win trophy with increase graph and arrow, successful[/caption]
Sales Supervisor ( Chinese) – Male/Female - (5) Posts/လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက် )
၁)Sales Supervisor ( Chinese) – Male/Female - (5) Posts/လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ကျပ် ( အထက် ) /ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။ • The main Requirement - MUST BE CHINESE. ( Pure CHINESE , We will not consider those who come back from China studying) • CV in Chinese language is preferred. • Education - have to be graduated , Management Diploma is preferred. • Experience - must have at least (1) years of experience. • Skills - Computer Skills / Microsoft Office / Email - Internet / Understand both Chinese and Burmese very well. It would be great if he/she can understand english too. • Age - 23 Years and Above , not older than 32-35 • Salary -6lakhs or above can be negotiate • Others Requirements - can work under pressure , accept flexible work schedule , Stocktaking , overall shop operation, supervision the whole shop. GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်တွင် ရှိသော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဖြန့်ချီသည့် Company ကြီးတွေ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Supervisor – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက်
၁) Sales Supervisor – Male/Female - (5) Posts / လစာ - ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက် / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ် ။ • အရောင်းပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍အနည်းဆုံးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၁ )နှစ် ( သို့ ) ( ၂ ) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • Chinese (4) Skills ရရမည် ။ • အသက် ( ၂၀ ) နှစ် ( ၃၀ ) နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၉:၀၀ နာရီ မှ ညနေ ၅:၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေ တစ်ပတ်ခြား ၊တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ • ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ Distribution ပြုလုပ်သည့် Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်တွင်ရှိသော လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ Distribution ပြုလုပ်သည့် Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်+ကော်မရှင်+အခြားခံစာခွင့် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
၁) Sales Supervisor – Male - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ်+ကော်မရှင်+အခြားခံစားခွင့် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ • Sales Supervisor ရာထူးဖြင့် မုန့်ဖြန့်ချီရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၃ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည် ။ • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည် ။ • ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရှိပြီး ရန်ကုန်လမ်းကြောကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည် ။ • Microsoft Office ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည် ။ • အရောင်းပိုင်းတွင် စိတ်အားထက်သန် ပြင်းပြသူဖြစ်ပြီး Teamwork ၊ Communication ၊ Interpersonal Skill ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည် ။ • ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ • လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များအရ OT ဆင်းပေးနိုင်ရမည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၇း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၄း၃၀ နာရီအထိ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • တနင်္ဂနွေနှင့် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ် တွင်ရှိသော FMCG Distribution Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )